Yusuf Garaad: Xamar Xilal Badanaa!
Dhegeheyga waxaan marar badan ku maqlay shakhsiyaad ayaga oo aan ahayn horena u noqon loogu yeerayo Madaxweyne. Mararka qaar anigaaba ka mid ah dadka loogu yeero inkasta oo aanan raalli ka ahayn xil aanan qaban in la iigu yeero.
Waxaan maqlay Wasiir, Xildhibaan oo hadda noqotay Xildhibaane ayna ku jiraan dadka tirada badan ee hadda damacsan in ay noqdaan Xildhibaan. Waxaa dhegeyga ku soo dhaca Generale ay ku jiraan saraakiil aan General ahayn. Taliye, Agaasime, Mas’uul sare, Shiikh, Doctor, Professor, Injineer iwm oo loogu yeerayo qof aan derajada lagu sheegayo aan hayn ama aan shahaaddadeeda haysan iyadu waa joogto.
Xilalka iyo derejooyinku intaa kuma koobna. Xataa waalidka iyo xididka ayay u gudbeen.
Markii aan intaan ka sii yaraa waxaan adeegsan jirnay adeer ama eeddo si aan xushmad ugu muujinno qof naga da’ weyn xataa haddii aynaan is aqoon. Taa lafteeda wax badan ayaa iska beddelay.
Hadda waxaa laguugu yeerayaa abti, ina adeer, seeddi, dumaashi iyo qaar kale. Garan waayay wax Allah wax aan ku macneeyso maaddaama aadan aqoon qofka sidaa kuugu yeeraya amaba og in aydnaan intaa midna isu ahayn.
Miyaan Muqdisho la joogi karin adiga oo aan ku gabban shaar aadan lahayn? Mararka qaar waa laguu gelinaya shaarkaas iyada oo aan lagaala tashan. Miyaan la ahaan karin qofka aad tahay oo aan waxba lagu cayilin?
Sow ma habboona in muwaaddin kasta aan xushamad iyo karaama ugu heyno in uu yahay qofka uu yahay? In uu yahay Aadane yahayna Soomaali? Miyaanay ahayn in aan ogaanno in qof kastaa uu mudan yahay in la karaameeyo, haddii aan isagu karaamada iska qaadin? Si aan ka dibna ugu qiimeyno fikirkiisa iyo falkiisa?
Qormadeyda ulama jeedo in xushmadda Dowladeed iyo midda ehel, xidid ama aqooneed laga tago. Taas cagsigeed ayaan is leeyahay haddii qof kasta macallin loogu yeero waxaa macnaha laga qaadayaa xushmadda Macallinka iyo Macallimadda. Sidoo kale derejo kasta ayaa qiimaheeda la barxayaa haddii qof aan ahayn loogu yeero.
Waxaa kale oo meesha ka baxaya qiridda dadaalka iyo dhabar adeyga uu sameeyay qofka derejo aqooneed sita, oo tusaale ku dayasho mudan u noqon lahaa ardeyda.
Posted by Yusuf Garaad at 17:21:00